WordPress: कसरी ट्याग क्लाउड पृष्ठ निर्माण गर्ने Martech Zone
WordPress: कसरी ट्याग क्लाउड पृष्ठ निर्माण गर्ने
बिहीबार, फेब्रुअरी 22, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मेरो थिमको नयाँ सुविधाहरू मध्ये एक ट्याग क्लाउड पृष्ठ हो। मलाई मन पर्छ ट्याग बादलहरू, तर ती वास्तविक उद्देश्यका लागि होईन। मैले प्रदर्शन गरेको ट्याग क्लाउड वास्तवमै मेरो पहिचानको लागि एक मार्ग हो जुन म शीर्षकमा छु वा छैन मेरो ब्लगको सन्देश समयसँगै परिवर्तन हुँदैछ।
नयाँ ब्लगर सहयोगी अल Pasternak, कसरी अल्टिमेट ट्याग वारियर प्लगइन प्रयोग गरेर ट्याग पृष्ठ निर्माण गर्ने भनेर सोध्यो।
यहाँ कसरी छ: प्लगइन स्थापना गरेपछि र तपाईंको विकल्पहरू परिमार्जन गरेपछि, तपाईं तलको कोड तपाईंको पृष्ठ टेम्प्लेटमा घुसाउनुहुन्छ जहाँ तपाईंको सामग्री प्रदर्शित हुन्छ। तपाईं यो राख्न चाहनुहुन्न तपाइँको सामग्री को ठाउँमा... बस योसँग जोडिएको।
"ट्यागहरू" भनिने पृष्ठ थप्नुहोस् र सामग्री खाली छोड्नुहोस्। Voila! अब पृष्ठ तपाइँको ट्याग बादल प्रदर्शित गर्नेछ!
WordPress: पोस्ट वर्डप्रेस स्वत: रिलीज हुन्छ
तपाईंको ट्याग क्लाउड सुपर राम्रो देखिन्छ डग! नयाँ पाठकहरूलाई तपाइँ कुन प्रकारको सामग्रीको बारेमा तुरुन्तै थाहा पाउनको लागि उत्कृष्ट तरिका हो।
एक अनुकूल सुझावको रूपमा, म "इमेल मार्फत टिप्पणीहरूमा सदस्यता लिनुहोस्" बक्सलाई अचयनित गर्न पूर्वनिर्धारित गर्न सिफारिस गर्दछु।
धेरै व्यक्तिहरूले चाँडै टिप्पणी गर्छन् र त्यो सानो विकल्पलाई पनि ध्यान दिँदैनन्। जब तिनीहरू इ-मेलहरूसँग 'स्प्याम' हुन थाल्छन् र किन बुझ्दैनन्, यो धेरै कष्टप्रद हुन सक्छ।
मेरो दुई सेन्ट मात्र! 🙂
मैले सदस्यता चेकमार्कमा मिश्रित संकेतहरू पाउँदै छु... केही मानिसहरूले मलाई इमेल गरे र मलाई भने कि तिनीहरूले सदस्यता लिन नबिर्सनका लागि यो पूर्व चयन गरिएको होस् भन्ने कामना गरे। म बरु पूर्व चयनको पक्षमा गल्ती गर्छु। यदि कसैले तपाईंको टिप्पणीको जवाफ दिन्छ भने, अवश्य पनि तपाइँ सूचना प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। र यो अप्ट आउट गर्न धेरै सरल छ।
Gotcha, राम्रो सामान।
मैले यहाँ दोस्रो डगको तर्क गर्नु पर्छ।
एक टिप्पणी लेख्दा, एक सामेल / छलफल सुरु हुन्छ। यसैले मलाई लाग्छ कि यो स्वाभाविक हो, कि एक सूचित गर्न चाहन्छ।
मार्क्स 22, 2007 मा 2: 12 PM
"राम्रो देखिने" बादल!
तपाईले विवेकको साथ एक भन्दा बढी रंगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको क्लाउड ट्यागमा रङहरू प्रयोग गर्ने एउटा तरिका:
- मुख्य रङ चयन गर्नुहोस्, यसलाई सबैभन्दा ठूलो फन्टमा असाइन गर्नुहोस्;
- साना फन्टहरूको लागि यो रंग "मिश्रण"।
मा "रंग" उदाहरण
मई 4, 2007 मा 6: 18 एएम
म एउटा ब्लग सेटअप गर्ने प्रयास गर्दैछु जहाँ म ट्याग क्लाउडमा धेरै अन्य मानिसहरूका ब्लगहरू प्रदर्शन गर्न सक्छु। यो काम गर्छ?
मई 4, 2007 मा 7: 43 एएम
रोचक, टम। मलाई लाग्दैन कि यो समाधानले काम गर्दछ किनकि यो केवल यस ब्लगमा थपिएका ट्यागहरूबाट तान्दै छ। यद्यपि, यदि प्रत्येक ब्लगहरू Technorati मा छन् भने Technorati को API प्रयोग गरेर ट्यागहरू तान्न र जम्मा गर्न सम्भव हुन सक्छ।
एक रमाइलो सानो प्रोग्रामिङ परियोजना जस्तै लाग्दछ!
जुन 11, 2007 मा 9: 31 PM
नमस्ते श्री डग
म ट्याग क्लाउड सिर्जना गर्न जेरोमको किवर्ड प्लगइन प्रयोग गर्दैछु। मैले अल्टिमेट ट्याग वारियरको सट्टा जेरोमको किवर्ड प्लगइन प्रयोग गर्न सिफारिस गरें।
मलाई लाग्छ अल्टिमेट ट्याग वारियर प्रयोग गर्न धेरै जटिल छ। जे भए पनि धन्यवाद।
जुन 11, 2007 मा 9: 45 PM
धन्यवाद, Dendi! मैले तपाईंको टिप्पणीहरूमा प्लगइनमा लाइक थपेको छु। मलाई विश्वास छ परम ट्याग वारियर अलि डरलाग्दो हुन सक्छ।
अप्रिल 6, 2008 मा 2: 45 PM
राम्रो सफा सल्लाह। बाडेको मा धन्यवाद।